Mayarka Magaalada Liverpool Oo Aaminsan In Taageereyaasha…
Taageereyaashii kooxda Atletico Madrid u raacay ciyaartii ay Magaalada Liverpool kula soo ciyaareen kooxda Liverpool, ayaa lagu eedeeyey inay qayb ka ahaayeen faafidda xanuunka Coronavirus ee sida xun qaaradda Yurub iyo dunida kaleba ugu faafaya.
Atletico Madrid ayaa lugta labaad ee wareegga 16-ka Champions League u tagtay Liverpool bishii hore iyadoo ay la socdaan ilaa 3,000 taageereyaal ah, waxaana xilligaas waddanka Spain ka jiray kiisas badan oo Coronavirus ah, hase yeeshee waxa loo ogolaaday inay gudaha Ingiriiska galaan, isla markaana ay garoonka Anfield dhex fadhiistaan iyadoo ay tobannaan kun oo taageereyaasha Reds ahna fadhiyeen.
Ka hor intii aanay ciyaartaasi bilaabmin, taageereyaasha Atletico Madrid waxay bannaanka garoonka ka sameeyeen socod iyagoo ku dhowaadayy qof kasta oo Anfield soo galayay.
Duqa magaalada Liverpool, Joe Anderson ayaa maanta sheegay inay qalad ahayd in taageereyaasha Atletico Madrid loo ogolaado inay yimaaddaan Ingiriiska, gaar ahaan magalaada uu Mayarka ka yahay.
“Anigu waan kasoo horjeeday, go’aanka murugada leh muu ahayn mid aniga iga yimid, haddana waa inaynu la tacaalno waxa maanta iyo berri dhacaya, wixii shalayna iska dhaafno. Kaliya waxaan doonayaa inay dadku iska fikiraan” Ayuu yidhi Joe Anderson oo ah mayarka magaalada Liverpool oo qoraal ku baahiyey bartiisa Twitterka.
Wargeyska Liverpool Echo oo mayarka la hadlay ayaa weydiiyey sababta go’aanka qaldan loo qaatay waqtigaas ee taageereyaal ka yimid waddan uu ka dillaacay Coronavirus loogu ogolaaday inay soo galaan Liverpool, ayaa ku jawaabay: “Waxaanu soo jeedinay waqtigaas, in taageereyaasha Madrid aan loo ogolaanin inay yimaaddaan garoonkooda, laakiin wax layaab ahayd in loo ogolaaday inay usoo safraan Liverpool oo ay tagaan Anfield. Waxay ila tahay in dawladdu aanay qaadin tallaabo ku filan, waxaanay u muuqatay in laga cago-jiidayay in wax laga qabto waxyaabaha dadka walaaca ku hayay ama saamaynayay dhaqaalahooda waqtigaas.
“Liverpool waxa hadda lagu arkayaa kiisas si xawli ah u kordhaya iyo in si degdeg ah uu xanuunku ugu faafayo magaalada.”